Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud oo saxiixay dhismaha guddiga madaxa-banaan ee xuquuqul iinsaanka Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud oo saxiixay dhismaha guddiga madaxa-banaan ee xuquuqul iinsaanka Soomaaliya
August 14, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Shiikh Maxamuud oo saxiixaya dhismaha guddiga madaxa-banaan ee xuquuqul iinsaanka Soomaaliya.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa maanta oo Axad ah si rasmiya u saxiixay dhismaha lagu dhisayo guddiga madaxa-banaan ee xuquuqul aadanaha Soomaaliya.
Madaxweynaha oo khudbad ka jeediyay munaasabada saxiixa ayaa sheegay in dhowrista xuquuqda aadanaha ay qeyb ka tahay dhismaha dowlad wanaaga iyo in nabad iyo caddaalada lagu wada noolaado.
Ugu dambayna Xasan Shiikh ayaa hoosta ka xariiqay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ballanqaadeyso inay iskaashi iyo wadashaqeyn buuxda u fidin doonto guddigan madaxa-banaan ee xuquuqda aadanaha iyo sidii uu waajibaadkiisa u gudan lahaa.
September 8, 2016 Wasiirka arrimaha dibada DFS Cabdisalaam Cumar Hadliye oo waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay safiirka cusub ee Jabuuti
Muqdisho-(Puntland Mirror) Warar sirdoon ayaa sheegaya in hoggaamiyihii maleeshiyada Al-Shabaab uu geeriyooday. Sargaal sirdoonka Soomaaliya katirsan oo magaciisa qariyay ayaa laanta Af-Soomaaliga ee VOA u sheegay in Axmed Cumar Cubeydah uu ku geeriyooday meel kutaala [...]